I-Victoria Lodgings self contained studio apartment - I-Airbnb
I-Victoria Lodgings self contained studio apartment
Masterton, Wellington, i-New Zealand
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Jo
U-Jo Ungumbungazi ovelele
Siyakwamukela ku-Victoria Lodgings. Ifulethi elisanda kulungiswa eliqukethe ngokugcwele elisuka emgwaqweni endaweni enamaqabunga e-Victoria Street, indawo enokuthula engumakhelwane imizuzu engu-5 kuphela ukuya enkabeni yedolobha.
Uzothola indawo yokungena ehlukile emgwaqweni ekuholela phansi emzileni oya emnyango.
Konke ongakudinga ekuhlaleni kwakho kukhona.
Zonke izinto zangasese ziyatholakala, okungukuthi i-shampoo, i-conditioner kanye nokugeza umzimba. Kukhona futhi ama-shower caps, okokuhlanza kanye nomshini wokomisa izinwele.
Ukupheka kuyimpepho ene-microwave/i-convection oven ehlanganisiwe, i-induction hob kanye nobulula be-pan yokuthosa kagesi. Izinhlobonhlobo ezigcwele zekhofi namatiye ziyatholakala futhi ubisi luyatholakala.
Ukunethezeka kwakho, kunempompi entsha sha ye-Fujitsu floor console yokukugcina ufudumele ebusika futhi uphole ehlobo.
Uma uthanda ubusuku e-, khona-ke kukhona i-Smart TV ene-Netflix kanye nesistimu yomsindo ye-Jwagen enomsakazo, i-CD ne-blue-tooth yemisindo yakho.
Umshini wokuwasha umthwalo wangaphambili utholakala ekhishini kanye nolayini wezingubo zokugqoka ovulekayo egcekeni ukuze uhlale uphezulu ekuhlanzeni kwakho. Ibhodi loku-ayina ne-ayina nakho kuyatholakala.
Ngeminyango yase-France yindawo yokuhlala yangasese phakathi kwezindawo eziboshiwe. Kungcono ukuqeda usuku nge-cuppa noma ingilazi yewayini.
Sicela wazi ukuthi awukwazi ukubhema noma ukushaya endlini. Futhi ayizifanelekeli izingane nezilwane ezifuywayo.
4.98 out of 5 stars from 103 reviews
4.98 · 103 okushiwo abanye
Ibanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya kwamanye amathilomu ethu amahle kakhulu nama-bar. Futhi imnyuziyamu ye-Aratoi negalari yezobuciko kanye nepaki elihle leNdlovukazi uQueen Elizabeth
Ngizotholakala kunoma yisiphi isimo esiphuthumayo kodwa ngempela, ngifuna ukukushiya ukuze ujabulele indawo ngokuthula.
UJo Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Masterton namaphethelo